Xaflad loo qabtay ciidanka xoogga dalka soomaliyeed
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta u dabaaldagay xuska 12 april ee ku aadan maanta, kana dhacay garoonka istadio Muqdisho.
Xafladan oo ay ka soo qayb galeen dadwayne aad u fara badan oo ka kala socday Magaaladda Muqdisho iyo nawaxigeeda ayaa waaxa lagu soo bandhigay dibad bax ciidan oo ay ka qayb galeen saraakiil iyo askar horay uga tirsaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed.
Munaasibadaan lagu maamuusayay xuska Sanadguuradii 45aad ee ka soo wareegtay markii la aas aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa markii ugu horeysay ka qeybgalay mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha labada gole ee DFKMG ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyagoo halkaasi salaan kaga qaatay cutubyadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee maanta u dabaaldagayay sanad guuradii 45 aad ee ka soo wareegtay markii la aas aasay 1960 kii.
Dhoolatuskii iyo salaantii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka dib ayaa halkaasi waxaa ka hadlay generaal Maxmed Nur Galaal oo ka hadlay taariiqda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in ciidanka ay yihiin difaacii dalka lagana sugayay in ay tababaraan maleeshiyada ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaa kalo ka hadlay isla munaasabadaas Madax ka tirsan xukuumadda Federaliga ee Jamhuuriyadda Somaliya iyo xildhibaano ka socday Baarlamaanka Federaliga ee Jamhuuriyadda oo beryahaynba booqashadda ku maraayay Magaladda Muqdisho. Madaxdaas waxaa ka mid ahaa Mudane Muuse Suudi, Mudane Cismaan Caato iyo Mudane Maxamed Qanyare oo dhamaantood wasiiro ka ah Xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisal Wasaare Professore Cali Maxamed Geedi.